Delta, emulator vaovao ho an'ny iOS tsy misy Jailbreak | Vaovao IPhone
Delta, emulator vaovao ho an'ny iOS tsy misy Jailbreak
Ny lalao video tsy mitongilana indrindra dia ao anaty vintana satria tsy ho ela dia hanana emulator ho an'ny iOS izay ahafahan'izy ireo milalao lalao video mahazatra indrindra toy ny Super Nintendo, Game Boy Advance ary sehatra maro hafa. Delta, izay ny anaran'ny fampiharana mamela antsika hanao an'io, dia ho hita tsy ho ela ao amin'ny App Store, ary tao amin'ny Actualidad iPhone dia nahazo ny fidirana amin'ny Beta voalohany izahay ary afaka nisedra azy io, manamarina ny hatsarany rehetra, toy ny interface tsara na ny fanamorana hanampiana ROM vaovao amin'ity emulator ity.
Amin'ny Delta dia ho hadino ny mampifandray ny iPhone amin'ny solosaina, na mila ny Jailbreak hahafahana manampy ROM hilalaovana. Ny fampiharana dia mifanaraka amin'ny rafitra fitehirizana rahona lehibe, toy ny iCloud Drive, Dropbox, Google Drive na Box, ary ny manampy ROM hilalaovana dia tsotra toy ny fampidirana azy ao anaty folder amin'ny iray amin'ireo rafitra fitehirizana voalaza etsy ambony, ka misafidy azy amin'ny menio fampiharana. Ankoatr'izay, rehefa mametraka ireo ROM ao amin'ny emulator dia hisintona ho azy avy eo amin'ny Internet ny fonony, noho izany dia hitandrina tsara ny tranomboky ny lalao video ianao amin'ny lafiny endrika. Lasa ireo emulator somary tsy dia fahita firy izay tsy azontsika apetraka afa-tsy amin'ny Jailbreak.
Amin'izao fotoana izao, ny Super Nintendo na ny Game Boy Advance ROM ihany no azo ampiana, fa te hampiditra sehatra vaovao mifanentana amin'ny Delta tsy ho ela ny mpandrindra, ary afaka mankafy fanangonana lalao video amin'ny iPhone izahay. Amin'izao fotoana izao dia tsy mahafantatra antsipirihany misimisy momba ny fotoana mety hampiasana azy na ny vidiny hisy izahay, fa fantatray Kasaina hifanaraka amin'ireo mpanara-maso MFi sy hifanaraka amin'ny iPhone, iPad ary iPod Touch. Hampahafantatra anao ny fizotry ny tetikasa izahay rehefa mianatra data vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Delta, emulator vaovao ho an'ny iOS tsy misy Jailbreak
Aiza no ahafahako misoratra anarana amin'ny beta. Ao amin'ny pejy ofisialy dia milaza fa nakatona izy io. Tsy fantatro akory hoe misy beta ho an'ny daholobe.
Misy mahalala ve ny antony hifehezana ny Mfi tsy miasa intsony ao amin'ny iOS 10 (10-10.2)?
Manokana ny Moga Ace Power, amin'ny iPhone 5, 5s ary 5c
Noheveriko fa simba ny mpanara-maso ahy saingy nosedraiko tamin'ny iPod 5g sy iPhone 5 mihazakazaka iOS 9.3.5 ary tonga lafatra izany
Inona? dia hoy izy:
Raha najanon'izy ireo be ny guanajear ary nanerantany ny fampiasana emulator ao amin'ny iOS dia hanana tsena bebe kokoa aza izy ireo, betsaka kokoa ny mpilalao konsoly noho ny an'i Candy Crush Saga
Valiny amin'ny inona?
Avereno jerena ny Sudio Regent: headphones marobe misy fahaleovan-tena amin'ny vidiny mihena
Miaraka amin'ireo horonan-tsary ireo dia mikasa ny hisarika ny mpamaky Game of Thrones i Apple